ပန်ဒိုရာ: ဒင်-ဒို ဂန္ထ၀င်ရှင်းတမ်း
သတ်ပုံတွေမေ့နေတဲ့ စာလုံးတွေ အများကြီးပဲ... ကြိုးစားပမ်းစားလဲ ရှာမကြည့်မိဘူး...
အားထုတ်ပြီး ရှာဖွေ ရှင်းလင်းပြောပြထားတာ တကယ်ကောင်းပါတယ်... နောင်ကို မသိတဲ့ စာလုံးပေါင်းများရှိရင် မေးပါရစေနော်...
အားကိုးပါတယ် ပန်ပန်..း))
30 Jan 10, 23:16
kom: ဘန်ဒါက ဘယ်သူရိုက်တာလဲ မှန်မှန်ပြော။
30 Jan 10, 23:15
kom: အခုထိ တဝင်းပူလို့ထင်နေတုံးဘဲ။ ဘာဘဲပြောပြော ။
ခုမှပဲ သတ်ပုံကျမ်းတွေ ထွက်လာတော့တယ်။
အင်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းပါတယ် ကျုပ်လဲ တဝမ်းပူ ထင်နေတာ အခုမှပဲ ပန်ဒိုရာစံကြောင့် ထဆင်ထူး လိုက်တော့မယ် အမှားမြင် အမှန်ပြင် လို့ ဆိုတယ် မဟုတ်လား...ဗျ!
That's ok ...Pan taw ra...
ကန္တာရကတော့ “တဝင်းပူ” မှန်တယ်ထင်ပါတယ်နော်..။
ဗဟုသုတ ရစေပါတယ် ဗျာာာာာ
တချို့ဟာတွေ ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတာ ကျေးဇူးးနော်
ဒါပေမယ့် အိုင်အိုဒင်းဆားပါ။ ကျွန်တော်လည်း တ၀မ်းပူထင်နေတာ...ကျေးဇူး
“ဂန္ထ + လောက” နဲ့ “ဖွဲ့+တည်ရာ” ရဲ့ ဆက်စပ်မှုကို တွေးသွားတာက စိတ် ၀င်စားစရာပါပဲ။
ဟုတ်ပ လူညီရင် ဤ ကို ကျွဲ ဖတ်လို့ ရသလိုပေါ့....ကျွန်မ လို့ ရေးရမယ်မှန်း သိရက်နဲ့ ဝဆွဲ နဲ့ နသတ် ချန်လို့ လွယ်လွယ် ကူကူ ကျမ လုပ်ပစ်နေတာ ကြာပေါ့....မှတ်သားစရာတွေပါ မပန်...:))
မြန်မာစာပေ ယောင်ဝါးဝါးဖြစ်နေသူ ကျွန်ုပ်အတွက် အလွန်ပဲ အဖိုးတန်လှပါပေတယ်ဗျာ..ဒို နဲ့ ဒင် နဲ့လဲနောက်ငြင်းကြပါဦး..ကိုချစ်ဖေကတော့.ရမ်းသမ်းမှန်းသန်း ထ ဆင်ထူးအောက်ကပဲထင်နေတာ
ဂန္ထ၀င်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မမေလဲ ခဏခဏ ငြင်းရဖူးတယ်။ အများအားဖြင့် အသံထွက်အတိုင်း တ၀မ်းပူနဲ့ ပေါင်းတယ်လို့ ထင်ကြတာကိုး။
အိပ်မက်ဖိုရမ်ကဟာ မြင်ဖူးပါတယ်မှတ်တာ မမေ ဆရာသွားလုပ်ထားတာပဲ။ :D
ဒင်-ဒို ဂန္ထ၀င်ရှင်းတမ်းကြီးက မှတ်သားလောက်ပါပေတယ်။
မြန်မာစာ အရေးအသားများ စာလုံးပေါင်းကနေ စပြီး ခက်ခဲတာပဲ။ အခုအရွယ်ကြီးထိ မှတ်နေရသေးတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ မှားလည်း ကိုယ့်ဆရာမပဲ သိတာ အမှတ်ရော့ရုံပဲဆိုတော့ ဒီလောက်မဟုတ်ဘူး။ အခုတော့ မှားရင် လူတွေ အများကြီးမြင်မှာဆိုတော့ မမှားအောင် သတိထားနေရတယ်။ ဒါပေမယ့် ငယ်ငယ်ကတည်းက အမှတ်မှား အမှားကြီးမှတ်နေတော့ မှားနေတုန်း မှားနေဆဲပါပဲ။ ဒီလို နည်းနည်း နည်းနည်းစီ ရေးတဲ့ သူတွေ ရှိတော့ ဖတ်ရ မှတ်ရတာ မဆိုးဘူးပေါ့။
ခေါင်းစဉ်မြင်တော့ မော်ဒန်ကဗျာထင်နေတာ =)
အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. မပန်။
မသိသေးတာတွေ သိသွားလို့ ဗဟသုတုနဲ့ ပြည့်ဝလာပေမယ့် အဲဒီသုတကြီးက ကိုယ့်ပြသနာ ပြန်ရှာမှာ ကြောက်တယ်ဗျာ။
အခုမှ ဖဘ ကနေ လိုက်လာလို့ ဂနဿထဝင်ရှင်းတမ်းဖတ်သွားတယ်
ပြောရင်း ဆိုရင်းမှားပြန်ပြီ ဆိုတာမျိုးပဲ Talkii.. ရေးပြီးတော့မှ သတိထားမိခဲ့သေးတယ်။ မထူးတော့ ပါဘူးဆိုပြီး တိတ်တိတ်လေးနေလာတာ :)
Have you ever considered addingalittle bit additional than just your thoughts? I'm talking about, what you say is critical and every thing. But its got no punch, no pop! Maybe if you addedapic or two,avideo? You could have suchaextra potent weblog when you let individuals SEE what youre talking about as an alternative to just reading it.